Cylinder မှိုစက္ကူစက်အတွက်သံမဏိမျက်နှာပြင် China Manufacturer
ဖေါ်ပြချက်:သံမဏိကွက် - ထောင့်ဖြတ်ချုပ်ရိုး,အက်စ်ယက်ကွက်,သံမဏိဝါယာကြိုး
Home > ထုတ်ကုန်များ > စက္ကူစက်အဝတ် > ဆလင်ဒါမှိုဝါယာကြိုး > Cylinder မှိုစက္ကူစက်အတွက်သံမဏိမျက်နှာပြင်
ထွက်နိုင်ရေး: 50000 Square meter per year
သံမဏိ Cylinder မှိုဝါယာကြိုး, စက်အားဖြင့်ယက်ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းသည်အ ၀ တ်အထည်ရက်ခြင်းလုပ်ငန်းနှင့်ဆင်တူသော်လည်းဝါယာကြိုးဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းအမျိုးမျိုးကိုရက်လုပ်သည့်ပုံစံများဖြင့်ရက်လုပ်နိုင်သည်။ ၎င်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာအမျိုးမျိုးသောရှုပ်ထွေးသော application ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်အစိုင်အခဲနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ မြင့်မားသောတိကျသောနည်းပညာသည်ယက်ဝါယာကြိုးကွက်များ၏ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်ကိုမြင့်မားစေသည်၊ သို့သော်အသုံးပြုမှုများစွာရှိသည်။
အဓိက parameters တွေကို:
အိမ်သာသုံးစက္ကူ၊ စာရေးခြင်းစက္ကူ၊ ပုံနှိပ်ခြင်းစသည်တို့ပြုလုပ်ရာတွင်အသုံးဝင်သည်
ဆလင်ဒါမှိုစက္ကူပြုလုပ်သောစက်များတွင်အသုံးပြုသည်။ SYC 787 အမျိုးအစား၊ ၁၀၉၂ အမျိုးအစား၊ ၁၅၇၅ အမျိုးအစား၊ ၁၇၈၅ အမျိုးအစား
ဆလင်ဒါမှို၏အချင်းဆန့်ကျင်။ ပါဝင်သည်: Dia 1.25M, Dia 1.5M, Dia 1.75M, Dia2.0M, Dia 2.5M ။
5Mesh မှ 100 mesh အထိ Cylinder မှိုဝါယာကြိုး၏အကွာအဝေး။
ဆလင်ဒါမှိုဝါယာကြိုး: 304,304L, 316,316L, 430 နှင့် 201etc
သံမဏိကွက် - ထောင့်ဖြတ်ချုပ်ရိုး၏ပူးတွဲ: ထောင့်ဖြတ်ချုပ်ရိုး
SYC787,1092type, 1575type နှင့် 1785type ကဲ့သို့သောဆလင်ဒါမှိုစာရွက်ပြုလုပ်သောစက်အတွက်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်။
သံမဏိ Cylinder မှိုဝါယာကြိုး၏အားသာချက်များ:
၁။ နမူနာများ - စစ်ဆေးမှုအရည်အသွေးအတွက်အခမဲ့နမူနာများကိုပေးပို့ပါမည်။
2. ဖောက်သည်တစ် ဦး ချင်းစီအတွက်တိကျသောသတ်မှတ်ချက်များကိုဖော်ပြလိမ့်မည်
သံမဏိ Cylinder မှိုဝါယာကြိုး၏အသွင်အပြင်:
၅။ ချုပ်ရိုးတံဆိပ်ကပ်ခြင်းနှင့်မျက်နှာပြင်ပြခြင်းမရှိ၊ အလွယ်တကူအက်ကွဲခြင်းမရှိပါ။
သင်၏လိုအပ်ချက်များကိုတတ်နိုင်သမျှပိုမိုမြန်မြန်ပြောပြပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အင်ဂျင်နီယာများကသင့်အားအကောင်းဆုံးအကြံဥာဏ်များပေးပြီးအသင့်တော်ဆုံးကွက်၊ ဝါယာကြိုး၊ အထည် / စကရင် / ခါးပတ်ကိုဒီဇိုင်းထုတ်ပါမည်။
A: ပုံမှန်အားဖြင့်ကုန်ပစ္စည်းများကို ၁၅ ရက်အတွင်းပို့ပေးပါလိမ့်မည်။ အကယ်၍ အရေအတွက်ကများလွန်းလျှင်အလုပ်ချိန်ရက် ၂၀ မှ ၃၀ ခန့်ကြာလိမ့်မည်။
A: အချိန်ကွဲပြားခြားနားသောအသုံးပြုမှုနှင့်စက်ရုံကွဲပြားခြားနားသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်ပစ္စည်းကိုအခြားမည်သည့်တရုတ်ထက်မဆိုပိုကြာရှည်စွာအသုံးပြုနိုင်ရန်သေချာအောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
စံပြသံမဏိ Cylinder မှိုဝါယာကြိုးထုတ်လုပ်သူ & ပေးသွင်းရှာဖွေနေ? သင်၏ဖန်တီးမှုကိုအထောက်အကူပြုရန်ကြီးမားသောစျေးနှုန်းများဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ကျယ်ပြန့်သောရွေးချယ်မှုရှိသည်။ သံမဏိ Cylinder မှိုကြိုးအားလုံးသည်အရည်အသွေးအာမခံချက်ရှိသည်။ ကျနော်တို့သံမဏိဆလင်ဒါမှိုဝါယာကြိုး၏တရုတ်မူလစက်ရုံ။ သင့်တွင်မေးခွန်းများရှိပါကကျွန်ုပ်တို့အားအခမဲ့ဆက်သွယ်ပါ။
သံမဏိကွက် - ထောင့်ဖြတ်ချုပ်ရိုး အက်စ်ယက်ကွက် သံမဏိဝါယာကြိုး သံမဏိမျက်နှာပြင်ပုံနှိပ်ခြင်း ဆလင်ဒါမှိုများအတွက်ထောင့်ဖြတ်အဖုံး ဆီလီကွန်ရော်ဘာကြိတ်ခွဲဘီး အလိုအလျှောက်စက္ကူဖြတ်တောက်စက် အလိုအလျောက်စက်ကြိတ်စက်ရပ်